ယေရှု၏သွေးဆောင်မှုကို — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
သို့မဟုတ်မည်သည့်ခရစ်ယာန်များသည် - - အသစ်ခရစ်ယာန်တွေကိုကြားနာတူသညျယရှေုအဘို့အကြှနျုပျ၏စိတျနှလုံးထဲမှာချစ်ခင်နှိုးဆော်ကြောင်းအနည်းငယ်အမှုအရာရှိပါတယ်ဗတ္တိဇံအားဖြင့်ထိုသူတို့၏ယုံကွညျခွငျး၏အများပြည်သူအသက်မွေးဝမ်းလုပ်. ငါသည်ငါ့မိတ်ဆွေတချို့၏ထင်, သော်လည်း, အသစ်ခရစ်ယာန်တွေကိုအမှတ်တံဆိပ်တို့ကဘယျအရာကိုဆိုလိုအကြောင်းကိုအနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးခဲ့ကြသူအ. သူတို့ကအသစ်သတ္တဝါတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ they've သောဧဝံဂေလိစကားကိုနားထောငျ, သူတို့အသစ်စိတ်နှလုံးကိုရှိသည်, သူတို့ဆေးကြောခြင်းနှင့်အပြစ်နှင့်လွတ်ခဲ့ကြပြီ. ထိုသူတို့ကဤသူတို့သည်နောက်တဖန်မသွေးဆောင်မှုကိုရုန်းကန်သို့မဟုတ်ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်ကိုဆိုလိုသည်ထင်. ဒါပေမယ့်ဘယ်သူ့ကိုမှ who's တစ်ပါတ်များအတွက်ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်သငျသညျစစ်မှန်တဲ့မဟုတ် that's ပြောပြနိုင်. အဆိုပါမေးခွန်းကျွန်တော်တို့သွေးဆောင်မှုကိုရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်ရှိမရှိမဟုတ်ပါ. အဆိုပါမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်, ငါတို့သည်အဘယ်သို့သွေးဆောင်မှုကိုတုံ့ပြန်လိမ့်မည်?
ငါကလည်းတစ်ကိုးကားယခုအပတ်ဖတ်, "လူအပေါင်းတို့သည်လည်းစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံကြသည်. ကအသက်ရှင်သောသူတယောက်မျှမရှိပြိုပျက်မရနိုငျရှိပါတယ်, ထောက်ပံ့ပေးသူကညာဘက်ကိုသှေးဆောငျမှုဖြစ်ပါသည်, လက်ျာအစက်အပြောက်၌ထား၏။ "ဒီစစ်မှန်သောကြေညာချက် Is? အစဉ်အဆက်ကပင်ဆုံးကောင်းစွာထားသှေးဆောငျမှုခုခံတွန်းလှန်နိုင်တဲ့သူတစ်ဦးတယောက်မျှခဲ့? ကောင်းစွာ, let's လုကာမှဖွင့် 4:1-2:
ယရှေုသညျ, သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်၏အပြည့်အဝ, ယော်ဒန်မြစ်မှပြန်လာသောနှင့်တော၌ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဦးဆောင်ခဲ့သည်, အရက်လေးဆယ်ပတ်လုံးသူသည်မာရ်နတ်၏စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံခဲ့သည်ဘယ်မှာ. သူကထိုကာလအတွင်းမှာဘာမှမစားရကြ၏, သူတို့နှင့်အဆုံးတွင်သူသည်မွတ်သိပ်ခဲ့သည်.
ပဌမ, ကျွန်တော်တို့ Luke's ဧဝံဂေလိတရားကိုယျ့ကိုယျကိုရှာတွေ့အတိအကျဘယ်မှာဆွေးနွေးရန်ပေးနိုင်ပါတယ်. အနည်းငယ်အစောပိုင်းက, အခနျးကွီးသုံးခုအတွက်, နှစ်ခြင်းဆရာယောဟန်ယေရှုအကြောင်းဟောပြောခြင်းနှင့်အခြားသူများကိုဗတ်တိဇံကိုဖြစ်ပါတယ်, ယရှေုသညျကိုယ်တော်တိုင်သူ့ကိုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံကိုခံရဖို့လာ. ယောဟနျသလူအများကြီးဗတ္တိဇံကိုခံတော်မူပြီ, ယရှေုသညျဗတ္တိဇံကိုသောအခါဒါပေမဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့အရာတစ်ခုခုဖြစ်ပျက်. သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ချိုးငှက်ကဲ့သို့ကိုယ်ထင်ရှား form မှာကိုယ်တော်အပေါ်ဆငျး; တစ်သံသကောင်းကင်သစ်စကားကိုမှလာ, "သင်ငါ၏ချစ်သားဖြစ်ကြသည်; သင်နှင့်အတူငါ။ နှစ်သက်မိပါတယ် "ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏ရုံမျှသာပရောဖက်ထက်ဖြစ်သညျယရှေုကြေညာပြီ, ့မေရှိယကိုထက်ကိုပိုပြီး; ယရှေုသညျဘုရားသခငျ၏အလွန်သားတော်.
ဘုရားသခငျသညျကနေဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပြီးနောက်, ဘုရားသခငျ၏ဗတ္တိဇံကိုသားတော်ကိုပွုပါမညျဘယျအကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြမီက, လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ဦးစာရင်းဝင်ပေးသည်, Jesus' မျိုးရိုးအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြ. အဆိုပါစာရင်းဝင်အပေါင်းတို့သည်လမ်းကိုပြန်အာဒံဝင်. ဒီတော့ဒီမှာကျနော်တို့သခင်ယေရှုများ, ဘုရားသခင်၏ဘုရားသခင့သားတော်ကိုမသာဘယ်သူသည်, ဒါပေမယ့်သူလည်းအာဒံ၏တစ်ဦးဆင်းသက်လာသည်, အလွန်ပထမလူ. ယရှေုသညျထူးခွား. ယရှေုသညျဘုရားသခငျသညျလူသည်.
ဒါကြောင့်, ကျွန်တော်တို့သွေးဆောင်မှုကိုတုံ့ပြန်သင့်တယ်ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန်မှာကြည့်ဖို့ပိုကောင်းတဲ့သူ? ဒီနှစ်ခုကျမ်းပိုဒ်ကိုကြည့်ရှုအဖြစ်, ငါတို့သည်အပြစ်သွေးဆောင်ရင်ဆိုင်ရသောအခါကြှနျုပျတို့သတိရသငျ့အရာသုံးခုကိုကြည့်ရှုဖို့သွားကြသည်.
ငါ. ဘုရားသခငျသညျကခွင့်ပြုသည်နှင့်သူ၏အစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်သွေးဆောင်မှုကိုအသုံးပြု (1-2တစ်ဦး)
ယရှေုသညျ, သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်၏အပြည့်အဝ, ယော်ဒန်မြစ်မှပြန်လာသောနှင့်တော၌ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဦးဆောင်ခဲ့သည်, အရက်လေးဆယ်ပတ်လုံးသူသည်မာရ်နတ်၏စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံခဲ့သည်ဘယ်မှာ.
ဒါကြောင့်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံတရားကိုအောက်ပါ, သူမညျးတျောကိုနှစ်သက်ခဲ့ဘယ်သူကိုနှငျ့ဘုရားသခငျ၏သားတျောကြေညာခဲ့သည်ဘယ်မှာ, သငျသညျဘုရားသခငျ၏ဝိညာဉ်တော်သည်မကောင်းသောအဟေရုဒ်မင်းကြီး dethrone ဖို့ယရှေုဦးဆောင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားစေခြင်းငှါ,, ဒါမှမဟုတ်လက္ခဏာနှင့်အံ့ဖှယျဟောပွောခွငျးနှငျ့အကျင့်ကိုကျင့်သူ၏ဝန်ကြီးဌာနကစတင်ဖို့တိုက်ရိုက်သူ့ကိုပေးပို့. သို့သော် that's မဟုတ်ရှိရာသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ကိုယ်တော်ပို့ဆောင်. အဲဒီအစားသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်သဲကန္တာရမှကိုယ်တော်ပို့ဆောင်. သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်မာရ်နတ်၏စုံစမ်းသွေးဆောင်ကိုယ်တော်ကိုလိမ့်မည်သည့်နေရာတွင်အလွန်အရပ်မှကိုယ်တော်ပို့ဆောင်.
အခုတော့အကယ်စင်စစ်အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်, သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တမန်တော်အတွက်သိကြှမျးသောတူညီသောလမ်းအတွက် - သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်သူဟာစာတန်ကိုယ်တော်ကိုစုံစမ်းသွေးဆောင်ရာအရပ်အလွန်အရပ်မှသညျယရှေုကိုဦးဆောင်သည်ကိုသိတယ် All- သိ. 20, သူကယေရုရှလင်မြို့သို့ရှင်ပေါလုကိုဦးဆောင်ခဲ့ကွောငျး, နှင့်ပေါလုကိုညှဉျးဆဲထိုအရပ်၌ထောင်ကျခံရမယ်လို့. သူကရှေ့တော်၌သောအန်တရာယျကပေါလုကိုပြောတယ်, သေးသူဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပွောရစေခြင်းငှါသွားကြဖို့ပေါလုကိုနှိုးဆော်ခြင်း. ဤအခြေအနေမရှိကွဲပြားခြားနားသည်. သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သညျယရှေုမာရ်နတ်ရင်ဆိုင်နှင့်စိန်ခေါ်ပါလိမ့်မည်သိတယ်, သေးသူဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပါတယ်ကိုယ်တော်ပို့ဆောင်.
အဘယ်ကြောင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မူစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံကြလိမ့်မည်သည့်နေရာတွင်သဲကန္တာရမှသညျယရှေုကိုပေးပို့မယ်လို့? ယရှေုသညျဘုရားသခငျသညျနှစ်သက်-နှငျ့ဘုရားသခငျ၏သားတျောဖွစျကွောငျးကို God's ကြေငြာ၏အလငျး၌, အဖြစ်ကောင်းစွာသညျယရှေုကိုအာဒံ၏သားဖြစ်ပြနှင့် Luke's စာရင်းဝင်, ယရှေုသညျသူပဲဖြစ်ကြွေးကြော်ခဲ့သူကြောင်းသက်သေပြဖို့အဘို့ဤသွေးဆောင်မှုအခင်းဖြစ်ပွားရာသတ်မှတ်. ဤတော၌ဤသည်ပဋိပက္ခယရှေုသညျဘုရားသခငျသညျလူဖြစ်ကိုယ်တော်တိုင်ပြသနိုင်ဖို့စင်မြင့်ပေးသည်.
နီးပါးလူအများမိုင်ယာမီအပူဤရာသီတုန့်ပြန်ရာလမ်းကိုတူပြဿနာရှိနေတတ်တယ်. Lebron ယာကုပျလိဂ်၏ MVP ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမဲ့သူ့အဖွဲ့အချန်ပီယံအနိုင်ရ can't. သူကလိဗ်လန်အစ်အောက်အရွက်, နှစ်ခုအခြားကြီးကျယ်တဲ့ကစားသမားတွေနှင့်အသင်းများကိုထ. ထိုသူတို့ကသူတို့ကြီးမားသောအထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပပစ်လိုက်တက်ရှိနေသေးသည်အခါ,, ကြောင်းကြွား, ကွောငျ့သူတို့ရှိလူအပေါင်းတို့သည်အခွက်တဆယ်, သူတို့အနိုင်ရလိမ့်မည် 5, 6,7- ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပို. ပင် - အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်ချန်ပီယံ. ဒါကြောင့်လူတိုင်းကသူတို့ရဲ့ဝါကြွားစကားကိုနားထောင်တော်မူပြီ, they've ဒီစူပါအသင်းအကြောင်းရှိသမျှတို့သည်ဖောင်းပွကြားသိ. ယခုရာသီစတင်မိမိတို့တက်ပြပါနဲ့သက်သေပြဖို့ရှိသည်အခါ,. သငျသညျ you've ဖြစ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကြွေးကြော်သောဤအံ့သြဖွယ်အိပ်မက်အသင်း Are? ထိုမီဒီယာသူတို့လူတိုင်းမျှော်လင့်သမိုင်းဝင်အဖွဲ့ဖြစ်လျှင်ကြည့်ဖို့သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကြည့်ပြီးစိစစ်.
ကောင်းပြီဆင်တူဖက်ရှင်အတွက်, စင်မြင့်သညျဘုရားသခငျ၏သားတျောဖွစျဖို့ကိုယ်တော်တိုင်ပြသနိုင်ဖို့ယရှေုကိုသတ်မှတ်ပြီးပါပြီ. သူသည်ဘုရားသခင်၏စိတ်တော်လိမ့်မည်?
ကျနော်တို့ဥယျာဉ်၌အာဒံကိုကိုစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်. သူသညျဘုရားသခငျ၏ပုံရိပ်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်, တစ်မူထူးခြားသောလမ်းအတွက် God's ဘုန်းအသရေကိုထင်ဟပ်ဖို့. သို့သော်ထို့နောက်စုံစမ်းသွေးဆောင်တတ်သောသူ, မြွေကဧဝကိုမှကြွလာထိုနှစ်ပါးလှည့်ဖြား. သူတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုမနာခံ, ဘုရားသခင်၏သမ္မာတရားကိုကျော်မြွေ၏မုသာစကားကိုယုံကြည်. အာဒံကိုဘုရားသခငျသညျသူ့ကိုဖြစ်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဖြစ်သက်သေပြဘဲ. ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏စကားကိုနားထောငျဖို့ပျက်ကွက်ကိုတော၌ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုမြင်. ကျနော်တို့ကမျြးစောငျတလျှောက်လုံးဒီထပ်ခါထပ်ခါတွေ့မြင်. ဘုရားသခင်သည်လူကိုယ်တော်ကိုဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းဖို့စေသည်, သို့သော်လည်းလူနှင့်ပျက်ကွက်နှငျ့ဘုရားသခငျ disobeys.
ဒါကြောင့်ဒုတိယအာဒံကိုပထမဦးဆုံးလုပျလို့မရဘူးဘယျသို့ပွုနိုငျမညျ? ယရှေုသညျဣသရလေမလုပျနိုငျအဘယ်သို့ပြုနိုင်မည်ဖြစ်လိမ့်မည်? မာရ်နတ်သည်အရက်လေးဆယ်ပတ်လုံးအဘို့သညျယရှေုလာနှင့်အပြစ်သို့သွေးဆောင်တတ်. ယရှေုသညျသူဖြစ်ဖို့ကိုကြွေးကြော်ခဲ့သူဖြစ်သက်သေပြပါဘူး. ယရှေုသညျ ပြပွဲ ကိုယ်တော်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များနှင့်မူသောငါတို့၏အပြစ်မဲ့ယဇ်ပုရောဟိတ်သည်အထဲကကျွန်တော်တို့ကိုကယ်ဖို့လာသောဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်. ထိုသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ့်လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ကိုယ်တော်ကိုစလှေတျ.
ယခု, ငါသည်ငါ့အမှတ်ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်သညျယရှေုမကောင်းသောအကျင့်ကိုစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံဆိုလိုမှနားလည်မှုလွဲခံရဖို့လိုခငျြ don't. ဒါကသစ္စာကိုဖျက်သည်. သို့သော်ထိုသို့ကျွန်တော်တို့ကိုမကောင်းသောအကျင့်ကိုစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံခံသောကျမ်းစာထဲမှာအလွန်ရှင်းပါတယ် God's အချုပ်အခြာအာဏာကိုပြင်ပမကျပါဘူး. ပြဿနာရှိနေတတ်တယ်မရေဒါအောက်မှာချော်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို. သူ့တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၏အပြင်ဘက်ကြောင်းဖန်ဆင်းခြင်းအားလုံးအတွက်ဘယ်သူမှနှင့်ဘာမှမရှိဘူး. ဘုရားသခငျသညျလုံးဝအချုပ်အခြာအာဏာသည်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်သညျဘုရားသခငျ၏ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲဖွစျနိုငျကွောငျးကမ်ဘာ​​ပျေါတှငျဘာမှမရှိဘူး. ဒီသွေးဆောင်မှုသညျဘုရားသခငျ၏ခွင့်ပြုချက်အားဖြင့်ဖြစ်ပျက်. ဘုရားသခင်ကခွင့်ပြုနှငျ့ယရှေုအားဖြင့်သူ၏ဘုန်းအသရေဘို့အအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်.
ညီအစ်ကိုညီအစ်မတွေ, ဂျိမ်းကျွန်တော်တို့စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံခံကြသောအခါငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံခံကြသည်မဟုတ်အလွန်ရှင်းလင်းပြတ်သားစေသည်. သို့ရာတွင်ဘုရားသခင်ကသွေးဆောင်မှုကိုခွင့်ပြုသည်နှင့်သူ၏ဘုန်းအသရေဘို့အအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ထားကြောင်းသိကြပါ. ဘုရားသခင့တန်ခိုးတော်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်နှင့်ဖြောင့်မတ်၏လမ်းစဉ်ကိုမှသင်တို့ကိုလွဲသွားရန်ကြိုးစားသောလောကရှိမကောင်းသောအတပ်ဖွဲ့များရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအားဖြင့်ညှိုးငယ်. သို့သော်သူတို့အားစုံစမ်းသွေးဆောင်တတ်သောသူကောင်းကင်ဘုံတွင်သင်၏ခမည်းတော်ထံသို့ဖြေဆိုသည်ကိုသိရကြပါ. ထိုအခါသူကသူ၏ဘုန်းအသရေဘို့အပင်သူတို့ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်.
ယခုငါတစ်ခါတစ်ရံတွင်ငါတို့သည်ဤလောက၌ဘုရားသခငျဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းဘယ်လိုကျဉ်းမြောင်းသောအတွေးအခေါ်များရှိသည်သောသူကျွန်တော်တို့ကိုအများအပြားရှိပါတယ်သိ. ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏ထိုကဲ့သို့သောကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့်အတူဧဝံဂေလိတရားကိုဝေမျှအဖြစ်အများပြည်သူနာခံမှသာဘုန်းကြောင်းထင်, ဒါမှမဟုတ်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့နို့တိုက်ကျွေးမှု, သို့မဟုတ်ကဟောပြောခြင်း. ငါသည်သင်တို့ကိုဤကိစ္စကနာခံမှု၏တစ်ခုတည်းသောကြင်နာမဟုတျကွောငျးကိုသိခငျြ. ကိစ္စအများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကနှစ်ဦးစလုံးနာခံမှုအလွန်. သင်ဠာ၏ဘုရားသခငျဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းရန်အဘို့အမိန့်တစ်ခုပရိသတ်ကိုရှိရှိသည်ပါဘူး.
ကျနော်တို့ပုဂ္ဂလိကအတွက်တဲ့အခါ, ကျွန်တော်အပြစ်တရားမှစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံလျက်ရှိသည်, ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နားထောင်သောအားဖြင့်ဘုန်းထင်ရှားတော်မူသည်. ကျနော်တို့ရန်သူ၏အ seductive မုသာကိုခုခံတွန်းလှန်ကြသောအခါဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းသည်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းသောဘုရားသခင်၏ပညတ်တို့ကိုလိုကျလြှောကျဖို့. ဒါဟာသူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတျောကိုထငျရှား, နှင့်သူ၏ယုံကြည်စိတ်ချ, အပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းရန်နှင့်သူ၏တန်ခိုးတော်. ညီအစ်ကိုညီအစ်မတွေဒါ, ဘုရားသခငျသညျသငျသညျကိုစုံစမျးခံရဖို့ခွင့်ပြုတိုင်းအချိန်, သငျသညျရနျသူမြား၏မုသာကိုကျော်ကိုယ်တော်ကိုယုံကြည်သဖြင့်ဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းရန်အဘို့အစင်မြင့်သတ်မှတ်ထားနေပါသည်.
ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံစေခြင်းငှါခွင့်ပြုမှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတတ်. ဤကိစ္စတွင်၌ဘုရားသခငျသညျယရှေုသညျဘုရားသခငျ၏အပြစ်မဲ့သားဖြစ်ဖို့ကိုပြသ, အဘယ်သူသည်မာရ်နတ်၏သွေးဆောင်မှုကိုတွန်းလှန်နိုင်ပါတယ်.
II.Weakness သွေးဆောင်မှုတွေကိုရန်ခုနှစ်တွင် Give ရန်ဆင်ခြေမဟုတ်
သခင်ယေရှုစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံသည်နှင့်အမျှ, သူကတစ်ဦးအားနည်းခြင်းနှင့်အားနည်းချက်ပြည်နယ်ထဲမှာတည်သည်. စာသားသညျယရှေုစာမစားမှီခဲ့ကြောင်းရှင်းပါတယ် 40 နေ့ရကျ. သူတို့၏အအဆုံးမှာ 40 မျိုးသိသာပုံရသည်ရာ - ယရှေုသညျဆာလောင်မွတ်သိပ်ခဲ့ရက်ပတ်လုံး; ကိုယ်အဘို့စားစရာကိုငြင်းပယ်ကိုစဉ်းစား 40 မြေတပြင်လုံးကျထကျ.
ကျနော်တို့မကြာခဏ Superman အဖြစ်ယေရှု၏ထင်လို, ဒါပေမဲ့သူက Superman မဟုတ်ခဲ့. သူကဘုရားကိုသူဖြစ်၏. တစ်ဦးခြားနားချက်ရှိပါသည်. ယရှေုသညျကိုမှန်ကန်သူဖြစ်၏. ဒီတော့သူကပင်ပန်းနွမ်းနယ်ရန်ကိုယ်ခံစွမ်းအားမဟုတ်ခဲ့, သို့မဟုတ်အားနည်းခြင်း, သို့မဟုတ်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု. ဒီကိစ္စမှာ, သူဟာဆာလောင်မွတ်သိပ်ဖြစ်သကဲ့သို့စာတနျအားနည်းချက်ယခုအချိန်တွင်ယရှေုကိုစုံစမ်းသွေးဆောင်. မိမိလက်ရှိရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းခြင်းမှ play ကြောင်းဒေသများရှိအထူးသညျယရှေုကိုတိုက်ခိုက်.
သူကတစ်ဦးထက်ပိုချက်ချင်းနန်းစံနှငျ့အတူယရှေုစုံစမ်းသွေးဆောင်, အစားအစာနှင့်အတူ, သူကွက်တိအပိုင်နိုင်အမှုအရာနှင့်အတူ. သူကကွက်တိသူ့ရဲ့ဖြစ်နိုင်ကြောင်းအရာနှင့်သညျယရှေုစုံစမ်းသွေးဆောင်, သေးသညျယရှေုကိုယ်တော်တိုင်ငြင်းပယ်. ယရှေုသညျကဒီမှာကိုယ်တိုင်ပြသထားတယ်, တာဝန်ထမ်းဆောင်ခံရဖို့မလာသောယောက်ျား၏သားဖြစ်, ဒါပေမဲ့အမှုဆောငျဖို့.
ညီအစ်ကိုညီအစ်မတွေ, ကျွန်ုပ်တို့သည်စာတန်အားနည်းခြင်း၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိမ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့မည်မဟုတ်ကြောင်းထင်ဖို့လုံလောက်တဲ့မိုက်သောမဖြစ်သင့်ပါဘူး. ငါကလည်းတစ်ကိုးကားယခုအပတ်ဖတ်, "အခွင့်အလမ်းသာတခါခေါက်လာ, ဒါပေမဲ့သွေးဆောင်မှုအ doorbell အပေါ်ရေးသားထားပါတယ်။ "သွေးဆောင်မှုကိုအလွယ်တကူမချန်မထားပါဘူး. အပြစ်သွေးဆောင်သငျသညျဆငျးသကျရှိနေဆဲနှင့်ဝတ်ဆင်လိမ့်မည်. သူတို့နောက်ဆုံးမှာ trip သို့မဟုတ်နောက်တဖန် run ဖို့လည်းပင်ပန်းရသည်အထိသားကောင်များကိုလိုက်သူအထိတ်လန့်ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာလူကြမ်းအဖြစ်လိုပဲ. စာတန်အားနည်းခြင်း၏ကာလ၌သင်တို့အပေါ်မှာလွယ်ကူသောကြောင့်ယူသွားသည်မဟုတ်. စာတနျသညျကြှနျုပျတို့၏ရန်သူဖြစ်ပါသည်!
ဤသည်သူတို့၏ရန်သူများအတွက်အားနည်းချက်များကိုစောင့်ကြည့်သည့်စစ်တပ်ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့, တို့ကိုပယ်ခြင်းငှါဆုံးဖြတ်. ကောင်းစွာ, အဘယ်သူမျှမ, ကအလုပ်လုပ်တယ်မဘယ်လို that's. လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များတစ်ဦးအားနည်းခြင်းကိုမြင်သောအခါ, အောင်မြင်မှု၏ဖြစ်နိုင်ခြေပိုမိုမြင့်မားသောကွောငျ့သောသူတို့အားတိုက်ခိုက်ရန်အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောအချိန်ဖြစ်ပါသည်. ကောင်းပြီအလားတူလမ်းအတွက်, ကမ္ဘာပေါ်တွင်, ဇာတိပကတိ, နှင့်မာရ်နတ်သည်အားနည်းခြင်း၏ကြိမ်မှာသူတို့ရဲ့မုသာကိုပယ် တင်. မည်မဟုတ်. အဖြစ်မှန်မှာတော့, သူတို့သာပိုပြီးသင်တိုက်ခိုက်ဖို့လိမ့်မည်.
ဒါကြောင့်ဘယ်လိုသညျယရှေုအားနည်းခြင်း၏သူ၏အချိန်အတွက်မာရ်နတ်၏သွေးဆောင်မှုကိုတွန်းလှန်နိုင်ခဲ့တယ်? မာရ်နတ်သည်အပြစ်ဖြေရာသို့သညျယရှေုကိုလမ်းပြဖို့အခွင့်အလမ်းမရှိခဲ့ဘူးကြောင်းစစ်မှန်တဲ့ပြဿနာရှိနေတတ်တယ်, ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုသညျယရှေုကိုယျတျောကိုအနိုင်ယူခဲ့? ကောင်းစွာ, ကျွန်တော်တို့အောက်ကကျမ်းပိုဒ်မှာကြည့်ရှုလျှင်, ယရှေုကိုအာဒံမလုပ်ခဲ့ဘူးသောအမှုကိုပြုသိမ​​ြင်မယ်လို့. ယရှေုသညျဘုရားသခငျ၏တရားစကားတျောကိုယုံပါ, စာတန်၏စကားတျောကိုကျော်. ယရှေုသညျခမညျးတျော၏အလိုတော်သူ၏အလိုတော်တင်သွင်း. သွေးဆောင်မှု၏ကာလ၌, ကျွန်တော်တို့မျှသာ willpower အားဖြင့်ခုခံတွန်းလှန်ဖို့ကြိုးစား shouldn't. သမ္မာတရားကိုကျွန်တော်တို့ကိုအဘယ်သူမျှမလုံလောကျအားကြီးသောသောကြောင့်,.
အားနည်းခြင်း၏ကာလ၌သွေးဆောင်မှုကိုတွန်းလှန်ခြင်းသွေးဆောင်မှုကိုကိုယ်တိုင်ကရှေ့တော်၌လမ်းကစတင်ခဲ့သည်. သငျသညျလာမည့်ရက်သတ္တပတ်ရင်ဆိုင်ရမည်သွေးဆောင်မှုကိုတွန်းလှန်ခြင်းယခုအပတ်ကစတင်ခဲ့သည်. သငျသညျအဘယျသို့ရှိနေကြသည်? အဘယျသို့သင်နှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြည့်ဆည်းနေကြသည်? သင်ဘယ်လိုသင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုအစာကျွေးကြသည်? ယရှေုသညျအားနည်းခဲ့. သို့သော်သခင်ယေရှုတစ်ဦးအချည်းနှီးသောအစာအိမ်ခဲ့သော်လည်း, သူဟာဝိညာဉ်တော်၏ပြည့်စုံ. ကျနော်တို့ရှာသငျ့, ဧဖက်အားပေးအဖြစ်, နှင့်ပြည့်စုံစေခြင်းငှါ - ကသိမ်းယူ - ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်. ကျနော်တို့သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်၌အကြှနျုပျတို့၏မျက်နှာများရှိသင့်, သူသည်မိမိကတိတော်၌အကြှနျုပျတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုပေးသည်နှင့်ထောက်ဘယ်မှာ. ငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်း၌ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီအစ်ကိုညီအစ်မတွေနဲ့အတူဒီလုပျဆောငျသငျ့.
ကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်အားနည်းခံစားရတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝအသက်တာ၌ကြိမ်ရှိပါတယ်. ကျနော်တို့ပင်ပန်းစေခြင်းငှါ, သို့မဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုညှစ်, သို့မဟုတ်ဖျားနာ, ဒါမှမဟုတ်သူကမသိဘဲအားနည်း we're သောငါတို့အစွမ်းသတ္တိ၏ထို့ကြောင့်ယုံကြည်စိတ်ချ we're. သို့ရာတွင်အဘယ်သူမျှကိစ္စအားနည်းခြင်းသည်အဘယ်သို့, အတွက်ပေးရသည့်ဆင်ခြေမဟုတ်ပြဿနာရှိနေတတ်တယ်. ဤအအားနည်းချက်အချိန်လေးအတွင်းမှာစုံစမ်းသွေးဆောင်တတ်သောသူ၏ကမ်းလှမ်းမှုကိုပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုထင်ရစေခြင်းငှါ, ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်နေဆဲမှန်, စာတန်ရဲ့ seductive ဆဲမုသားဖြစ်ပါတယ်.
၎င်းကမတရားသောမေထုန်မှစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံသောအခါ, ဘုရားသခငျသညျဟုကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပေး, "သင်သင့်ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်, သင်တို့သည်အဘိုးနှင့်ဝယ်ခဲ့ကြ. သို့ဖြစ်. ထို။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘုရားသခင်ကိုဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်း "သောအခါ၎င်းကဘုရားသခငျသညျဟုကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပေးမာနနဲ့တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ဖြစ်စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံ, "ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်အဘို့ဒါပေမယ့်တခြားသူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှာ Don't ။ " အားနည်းခြင်း၏ကြိမ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့သင့်, ယေရှုကဲ့သို့, ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမှီဝဲနှင့်ကိုယ်တော်စကားကိုနားထောငျ.
III ကို. စုံစမျးသှေးဆောငျယခုပင်လျှင်ရွေးကောက်ပွဲရှုံးခဲ့
စိတ်ဓာတ်ခံဆီသို့ဦးတည်အားကိုးနိုင်ဤကျမ်းပိုဒ် Reading, စဉ်းစား, "လူ, ယရှေုသညျကိုငါကိုယ်တော်နှင့်တူဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆန္ဒရှိဒါသန့်ရှင်း၏,"သို့မဟုတ်, "လူ, ပိုပြီးဒုတိယထက်ကိုပထမဦးဆုံးအာဒံကဲ့သို့ပာုတ်. ငါကပိုယောနနဲ့တူသညျယရှေုထက်ဖြစ်၏။ "ညီအစ်ကိုတို့, သောခရစ်ယာန်နှင့် Non-ခရစ်ယာန်များ၏မှန်. ကျနော်တို့ကပိုယောနနဲ့တူသညျယရှေုထက်အပေါင်းတို့.
ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အကြောင်းကိုဒီနေရာမှာဖတ်ကယေရှု၏နာခံမှုကိုအကြောင်းအရာသညျယရှေုရုံအခြားသောသူမဟုတ်ခဲ့ကြောင်း. ယရှေုသညျနာခံမှုတယောက်ဖြစ်ဖြစ်ပျက်တဲ့သူကိုကိုယ့်အခြားတယောက်မဟုတ်ခဲ့. အဘယ်သူမျှမ, ယရှေုသညျအသစ်ကျွန်တော်တို့ကိုကိုယ်စားပြုဖို့လာသောသစ်ကိုအာဒံခဲ့သည်. ယေရှု၏နာခံမှုကိုခဏ၌ဘုရားသခင်၏အလိုတော်မသာ, သို့သော်ယေရှုကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူခြင်းကိုခံရနိုင်ကြောင်းသည်ငါတို့အဘို့နားထောင်သောသူ. ယရှေုသညျကြှနျုပျတို့ပွု couldn't အဘယျအတတ်. သူကအာဒံကိုရှောက်သွားအမျိုးနှင့်ဣသရေလအမျိုးမလွန်နိုင်ကြောင်းနိုင်ဘူးသောစာမေးပွဲများဖြတ်သန်း - နှငျ့ရှေ့တော်၌သို့မဟုတ်ပြီးနောက်အဘယ်သူမျှမရှောက်သွားနိုင်ကြောင်း. ဘယ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုအဘယ်သူမျှမနိုင်သညျယရှေုနားထောင်သောသူ. ယရှေုသညျကိုအဘယ်သူမျှမချေမှုန်းနိုင်ရန်အနိုင်ယူ. ဤရွေ့ကား, အထူးသဖြင့်ရှုံးနိမ့်, သဲကန္တာရထဲမှာ, Luke's ယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရား၏အဆုံးတွင်ဖြစ်ပျက်မည်ကိုစာတန်၏အောင်မြင်သောရှုံးနိမ့်ဖို့ညွှန်ပြခဲ့.
ယောနကပင်သူ့ရန်သူဟောပြောဖို့လည်းခါးသီးခဲ့သော်လည်း, သခင်ဘုရားသည်ယေရှုမြေကြီးဆီသို့ရောက် လာ. , နှင့်သူ၏ရန်သူများကိုအသေခံ. လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်ယရှေုသညျအကြှနျုပျတို့သွေးဆောင်မှုမှပေးပြီသောတစ်ခုတည်းသောအချိန်များအတွက်ပေးဆောင်. တိုင်းတစ်ခုတည်းအချိန်. ယုံကြည်သူသည်အ, ယရှေုကိုပေးဆောင်ဘဲငါတို့ဥစ်စာထဲကတစ်ခုအပြစ်တရားမရှိ. ယရှေုသညျသင်ျခြိုငျးမှထ, ချေမှုန်းအပြစ်တရား, သေဆုံးခြင်း, နှင့်မာရ်နတ်. မာရ်နတ်သည်ရှုံးသည်. ငါတို့သည်ငါတို့၏အပြစ်များကိုမှဖွင့်နှင့်ခရစ်တော်၌အကြှနျုပျတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုတင်လိုလျှင်နှင့်ကျွန်တော်သူရရှိခဲ့သည်သမျှသောဆုလာဘ်ရရှိနိုငျ. ယေရှု၏နာခံမှုကိုကိုမြင်လျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုတားမဖြစ်သင့်, ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအားပေးသင့်ပါတယ်.
သငျသညျအပွစျကိုမှစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံကြသောအခါယခုတပတ်, သင်တို့၏ရန်သူပြီးသားကိုသင့်သခင်အားဖြင့်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ကြောင်းသတိရ. သင်သည်သင်၏အပြစ်တရားမှစုအတွက်ပေးဖို့ရှိသည် don't. အဆိုပါစုံစမ်းသွေးဆောင်တတ်သောသူပြီးသားပျောက်ဆုံးခဲ့သည်. သင့်ရဲ့ချည်နှောင်ချိုးပြီ. လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအသင်တို့အဘို့အဝယ်ယူလွတ်လပ်ခွင့်အတွက် Walk. တစ်ဦးရှုံးနိမ့်သောရန်သူတည်းဟူသော၏တောင်းဆိုချက်များအား Don't အထွက်နှုန်း. ယေရှုသည်သေပြီးမှထ, ကျနော်တို့စုံစမ်းသွေးဆောင်တတ်သောသူကိုတှနျးလှနျနိုငျရလိမ့်မယ်လို့, ကိုယ်တော်နှင့်တူကွညျ့ရှု. ကျနော်တို့အလွန်တူညီဝိညာဉ်တော်နှင့် indwelled ကြသည်ငါတို့သည်အလွန်တူညီလက်နက်ကိုင်စွဲ.
ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံကြသောအခါ, let's ကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့ ဘုရားသခင့ခွင့်ပြုနှင့်သွေးဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသည်, ထို အားနည်းခြင်းသွေးဆောင်မှုအတွက်ပေးရသည့်ဆင်ခြေမဟုတ်, နှင့် ထိုစုံစမ်းသွေးဆောင်တတ်သောသူပြီးသားရှုံးနိမ့်ခဲ့.
ငါတို့သည်ငါတို့၏အားနည်းချက်များနှင့်အတူစာနာနိုင်ခြင်းသောသူသည်မြင့်မားသောယဇ်ပုရောဟိတ်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသည်ကို, ငါတို့မူကားခပ်သိမ်းသောလမ်းအတွက်စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံထားပြီးတဲ့သူတဦးတည်းရှိ, အပြစ်မပါဘဲ -yet ခဲ့ကြသည်နည်းတူ. ကျွန်တော်တို့ကိုပြီးတော့ယုံကြည်မှုနှင့်အတူကျေးဇူးတရား၏ရာဇပလ္လင်သို့ချဉ်းကပ်ကြကုန်အံ့, ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီကရုဏာကိုခံယူခြင်းနှင့်ကျေးဇူးတရားကိုရှာဖွေစေခြင်းငှါဒါ။ (ဟေဗြဲ 4:15-16)
သခင်ယေရှုအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူစာနာနိုင်. ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံကြသည်အဖြစ်သူကစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံပြီ, ဒါပေမဲ့သူကအစဉ်အဆက်ကိုယ်တော်ကိုစုံလင်သောယဇ်ပုရောဟိတ်အောင်အတွက် ပေး. ဘယ်တော့မှ. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုနှင့်အတူသူ၏ရာဇပလ္လင်သို့ချဉ်းကပ်နိုင်, သနားခြင်းကရုဏာနှင့်ကျေးဇူးတော်အဘို့တောင်းပန်. Let's ယခုထံတော်သို့သွား.
Jem973 • အောက်တိုဘာလ 29, 2013 တွင် 2:26 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
သင်ကြားဘို့သင့်ကိုသိပ်ကျေးဇူးတင်ပါသည် ! ကြှနျုပျတို့၏ဘုရားသခငျကျနော်တို့ရင်ဆိုင်ရတိုင်းသွေးဆောင်သိတယ်ဘယ်လောက်သိရန်ဤမျှလောက်ကြီးစွာသောဒါဟာင် ! ယေရှု၌အပ်ပေးတော်မူ၏မပါဘဲစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံပြီဟုသိရန်ဤမျှလောက်ကြီးစွာသောဒါဟာင်, နှင့်မာရ်နတ်ရှုံးဖြစ်ကြောင်းသိရန် !!
အားပေးမှုများအတွက်သင်ကအရမ်းကျေးဇူးတင်ပါသည် ! ဘုရားသခင်သည်သင်၏ဝန်ကြီးဌာနနှင့်သင့်မိသားစုကိုကောင်းကြီးပေး.
(ငါ၏အ english ဘို့တောင်းပန်ပါတယ်, ငါပြင်သစ်ပေါ့)